Sare u kaca Ganacsiga Mobilada, iyo Faa'iidada ay u leeyihiin suuqleyda | Martech Zone
Arbacada, Nofeembar 20, 2013 Arbacada, Nofeembar 20, 2013 Kelsey Cox
Hadda macaamiisha ayaa wax ka iibsan kara khadka tooska ah wakhti kasta, iyo meel kasta oo leh calaamadda moobiilka ama wifi, shirkadaha ugu guulaha badan waxay hagaajinayaan barnaamijyadooda moobiilka si ay ula kulmaan baahida macaamiishooda. Dhawr sano ka hor uun, tafaariiqleydu waxay bilaabeen inay u maleeyaan in suuqgeynta iimaylku ay ahayd dariiq dhimanaya, laakiin dhawaanahan ayaa soo ifbaxayay M-ganacsiga waxay cadeyneysaa wax iska soo horjeed ah.
Xaqiiqdii, $ 1 kasta oo lagu maalgeliyo suuqgeynta iimaylka, celceliska celceliska waa $ 44.25, iyo boqolkiiba konton dhammaanba noocyada u gaarka ah ee loogu talagalay goobaha tafaariiqda ayaa ka dhaca taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada. Macaamiisha mobilada ayaa 48% waqtigooda ku bixinaya goobaha ganacsiga e-commerce, iyadoo 1kii doolar e-commerce 10 2013kiiba lagu isticmaalay taleefan casri ah ama kiniin ah. Sannadkii XNUMX, shirkadaha ku iibsanaya lacagta ugu badan ee iibka moobiillada waa Apple, Amazon, QVC, Walmart, iyo Groupon Goods, oo caddaynaya in suuqgeynta iimaylka dib loo soo noolayn karo haddii tafaariiqleydu ay bixiyaan waayo-aragnimo moobiil oo aad u sarreeya.
Xigasho muuqaalaysa sida awoodda suuqgeynta moobiilku u noqotay, shaxanka hoose.
Tags: ecommerceinfographicmarketingSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkaganacsiga gacanta